izoqhubeka ngaphandle kwezihibe imidlalo emibili yesibhakela - Ilanga News
Home Ezemidlalo izoqhubeka ngaphandle kwezihibe imidlalo emibili yesibhakela
izoqhubeka ngaphandle kwezihibe imidlalo emibili yesibhakela
IZOQHUBEKA ngaphandle kwezihibe imiqhudelwano emibili yesibhakela KwaZulu-Natal eyingxenye yezinto eziningi ezimisiwe ezweni ngenxa yokubhebhethekwa kwe-co-ronavirus ehlasele umhlaba wonke.
Ngemuva kokumiswa kwezimpi kuleli, umkhakha wesibhakela ugu-buzelwe yifu elimnyama kushona uFrancis Manning obeyimenenja entsha yalo mdlalo KwaZulu-Natal. Lesi sikhulu sifihlwe ngempelasonto edlule.
UCindy Nkomo ongesinye sezikhulu zeBoxing South Africa (BSA) uthe baphatheke kabuhlungu ngokuthi abakwazanga ukuhambela umndeni kaManning ngesikhathi usemanzini.
Lokhu kudalwe yimibandela eqinile ebekwe wuhulumeni nje-ngoba izinto eziningi kuleli zimiswe izinsuku ezingu-21.
“Ngemuva ngokudlula kwe-corona sizohlala phansi nophromotha abebehlele izimpi ezifundazweni ezahlukene. Yibona esizobabonelela kuqala nxa besathanda ukuqhubeka nezimpi zabo. Mibili kuphela imiqhudelwano emisiwe KwaZulu-Natal. Kumiswe obekufanele ube seMpangeni nowaseThekwini. Ngeke sibe nenkinga yokuthola umuntu ozoqapha isimo kulezo zimpi. Ukudlula emhlabeni kukaManning kushiye isikhala somphathi wesibhakela esifundazweni, kodwa hhayi ukuthi izimpi ngeke zisaqhubeka. Uma singamtholi umuntu ozoqapha izimpi eKZN, kungenzeka sijube noma iyiphi imenenja yesifundazwe esiseduze izokwenza umsebenzi ofanayo eKZN.
“Ukushona kukaManning kusishaye kakhulu ngoba ubenolwazi olujulile ngalo mdlalo.
Ukuba khona kwakhe yikhona obekwenza iKZN ihambe phambili ngokuhlelwa kwezimpi selokhu kuqale unyaka. Nokho-ke akukho esingakwenza kumele samukele isimo,” kusho uNkomo.
Lesi sikhulu sikugcizelele ukuthi isazokuba khona iBoxing Convention osekunesikhathi yagcina uku-ba khona. UNkomo uthi i-coronavirus ihlasele kuleli luvele lungakakhishwa usuku lokusingathwa kwalo mhlangano. Uthe konke okuningi ngawo kuzocaca kahle nxa sekunqo-tshwe lo mkhuhlane.
UManning uthathe umsebenzi kuLes Andreason ngonyaka odlule. Uthando lwakhe lwesibhakela yilona oluholele ekutheni aqokelwe ukuba yijaji ngaphansi kwe-African Boxing Union (ABU) nakwiWorld Boxing Council (WBC), kanti ubehambele umhlangano wamajaji alezi zinhlangano ngo-2018 eKenya.
Previous articleUmqeqeshi ugoloza ukudedela umdlali ozingelwayo
Next articleAbakwaCastle Lager banikelela i-corona